Nzuzo anyi banyere njikarịcha ihe nchọgharị | Martech Zone
Wednesday, July 28, 2010 Satọde, Satọdee 19, 2015 Douglas Karr
Nke a bụ ụdị ihe atụ nke stats ogo maka mkpụrụokwu asọmpi maka otu n'ime ndị ahịa anyị:
Ahịrị ọ bụla na-anọchite anya isiokwu, Y-Axis bụkwa ọkwa ha dịka e dere ya Lablọ nyocha Ikike. Ihe na-erughị ọnwa 2, anyị ga-enwetakwa ha na peeji nke 1. N'ime ọnwa isii, anyị ga-enwe ọmarịcha ọkwa maka ha. Site na ndị ahịa 6, anyị maara nke ọma ihe ọ chọrọ iji nweta saịtị nke ọma. Otu n'ime ndị ahịa anyị bụ isi na - akwadozi # 20 maka 1 nke usoro asọmpi kachasị elu na ụlọ ọrụ ha, yana aka ole na ole okwu ndị ọzọ ha nọ na ibe 3 maka ma melite.
Saịtị SEO abughi ihe nzuzo. Nke a bụ ihe anyị na-eme:
Gbaa mbọ hụ nchịkọta arụnyere nke ọma yana na anyị na-enweta ọnụ ọgụgụ dị mma na ihe ntọala bụ na anyị na-arụ ọrụ site na ya. Anyị na-akwadopụta isiokwu ndị na-anya n'okporo ụzọ bụ ihe dị mkpa maka azụmaahịa anyị chọrọ ịme na saịtị ahụ. Anyị na-anwa itinye usoro ntụgharị ụfọdụ mgbe ụfọdụ… mgbe ụfọdụ okporo ụzọ ị na-enweta anaghị adị mkpa ịchụ ego na azụmaahịa gị. Ọ dị mkpa ịmata ihe dị iche na abụọ.
Mee isiokwu isiokwu tinye n'ọrụ AdWords, Semrush na SpyFu iji nweta nghọta n'ime isiokwu anyị na-arụ ugbu a maka, ihe anyị na-agaghị ọkwa maka, yana ihe asọmpi ahụ bụ maka ya. Nke a ga-enye anyị usoro iji kwụsị. Anyị lekwasịrị anya na anyị enweworị ogo maka nke ahụ anyị maara na anyị nwere ike ịkwanye n'ime ọkwa dị elu… olile anya # 1 ogo.
Gbaa mbọ hụ na saịtị ahụ ndi isi a na-ege ntị na usoro isiokwu na ikike anyị chọrọ ka ọ nweta. (ịmaatụ: ụdị ngwaahịa anyị chọrọ ịhazi nke ọma jikọtara ya na site na igodo saịtị ma ọ bụ wepụta ya na njikọ dị ukwuu n'ime ọdịnaya peeji nke ụlọ). Mgbe mgbanwe algorithm nke Google kachasị ọhụrụ, anyị mere ka ndị ahịa anyị 'dọọ' na saịtị ndị ahụ ka ha buru ibu karịa nke miri emi. Nke ahụ pụtara na peeji ndị ọzọ, ma na-edebe akwụkwọ ọkwa nke atọ na karịa nke kachasị.
Gbaa mbọ hụ na saịtị ahụ nwere robots faịlụ, Sitemaps, ma debanye aha ya na ya webmasters site na isi ngwa ọrụ nchọta ọ bụla ka anyị nwee ike nyochaa etu igwe nchọta ahụ na-achọ ma na-edepụta ọdịnaya ahụ, yana ịpụta nsogbu ọ bụla.
Gbaa mbọ hụ na saịtị ahụ nwere ibe ma ọ bụ blọọgụ ahụ nwere ọkwá na - ekwu okwu na Keywords ma ọ bụ okwu ndị yiri ya (ọ bụrụ na ịchọọ ọchụchọ na isiokwu, lee anya na peeji nke nsonaazụ ọchụchọ ahụ iji chọta okwu ahụ). Nke a pụtara iji mkpụrụokwu na mmalite nke aha peeji, na mmalite nke nkọwa meta, na isiokwu, na mmalite nke ọdịnaya, yana n'ime ọdịnaya nke ibe (n'ime mkpado siri ike ma ọ bụ obi ike).
Fọdụ ndị ahịa nwere nnukwu ikike (nke pụtara na Google họọrọ ha dị elu dabere na akụkọ ihe mere eme nke ngalaba ha na usoro ọchụchọ ha na-asọ mpi). Ndị ọzọ enweghị ikike ka anyị wee chụpụ azum na-abawanye ikike ha. Emezuru nke a site na ijide n'aka na ha jikọtara ya na ngalaba ndị ọzọ dị mkpa nke na-akwado nke ọma maka isiokwu ma ọ bụ ngalaba ụlọ ọrụ akọwapụtara. Nke a na-ewe ọtụtụ ọrụ.
Ikpeazụ… anyị na-ejide n'aka na ha ga-enweta mgbanwe. Mgbe ụfọdụ, nke a chọrọ usoro njikarịcha, imepụta oku na-arụ ọrụ, yana ịhazi ọdịda peeji. Otú ọ dị, anyị maara na ọkwá na okporo ụzọ apụtaghị ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na anyị anaghị ebugharị dollar na azụmahịa.
Na-arụsi ọrụ ike ịchụso blọọgụ ndị ọbịa, na-ebipụta akwụkwọ akụkọ, na-aza ajụjụ ma ọ bụ na-ekere òkè na saịtị mmekọrịta dị mkpa maka isiokwu ahụ dị mkpa. Nke a bụ ebe ọchụchọ na mgbasa ozi mmekọrịta bido ichikota. Kwalite ọdịnaya gị na-aghọ isi… ọ bụghị naanị maka ịnya ụgbọ ala kamakwa maka njikọ ịkwọ ụgbọala na saịtị gị.
N'ezie, ihe a niile dị mfe… mana ọ bụghị. Inwe ezigbo ngwaọrụ, ịghọta otu esi etinye n'ọrụ nchịkọta ma nyochaa ọnụego ntụgharị, ma nwee ike ịkọwapụta data niile - nchịkọta, webmaster, ọkwa, isiokwu, wdg. bụ ihe siri ike juggling omume. Ndị ahịa anyị na-akwụ anyị ụgwọ ka anyị mee nke ahụ… na anyị na-azụkwa ha na usoro ahụ.
Fọdụ n'ime ụmụ okorobịa na ọbụna ndị ọzọ SEO ndụmọdụ arụmụka anyị si eme… ma ọ bụ ike na-arụ ụka mgbe ị na- # 1. 🙂
Tags: search engine njikarịchaAseo nzuzo